Talyaaniga oo dib u dhis ka bilaabay Isbitaalka Xooga Ee Muqdisho +Sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Talyaaniga oo dib u dhis ka bilaabay Isbitaalka Xooga Ee Muqdisho +Sawirro
Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya Safiirka Dowladda Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya ayaa maanta si wadajir ah u dhagax dhigay dib u dhis lagu sameynayo Isbitaalka Xoogga dalka ee Magaalada Muqdisho.
Xafladda oo ay sidoo kale ka qeybgaleen Madax ka socota Bankraft iyo UNOPS, waxaa ujeedkeedu uu ahaa dhameystirka Mashruuca dhismaha Isbitaalka Xoogga Dalka oo dowlada Talyaaniga ay balan-qaaday.
Waxaa halkaasi hadallo ka jeediyay Wasiirka Gaashaandhiga ee Soomaaliya C/qaadir Sheekh Cali Diini oo sheegay in Isbitaalka Xoogga Dalka uu yahay isbitaal taariikh weyn leh isla markaana Dowladda Talyaaniga ay weligeed taageeri jirtay.
“Isbitaalka Xooga Dalka waxaan ka bilownay meel eber ah laakiin hadda waxaa ii muuqata rajo wanaagsan, waxaana Dowlada Talyaaniga aan ka rajeynayaa in si wanaagsan ay inoogu dhisi doonto” ayuu yiri wasiirka.
Madaxa Hogaanka Caafimaadka ee Ciidanka Xooga Dalka Jen Liibaan Xuseen Cismaan ayaa isna sheegay in Dowlada Talyaaniga ay uga mahad celinayaan sida ay u garab taagantahay Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya.
Isbitaalka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa waxaa u taariikh weyn ku leeyahay dalka, waxaa markii ugu horeysay dhisay dowladii kacaanka, hase ahaatee waxaa uu ku burburay dagaaladii kala duwanaa ee soo maray Muqdisho.